Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciidamada dowladda iyo Itoobiya oo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabay Dhuusa Mareeb (Sawirro)
Ciidamada dowladda iyo Itoobiya oo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabay Dhuusa Mareeb (Sawirro)
Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee ka mid noqday howl galka AMISOM ayaa bilaabay dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ku wajahan deegaanada Al-Shabaab kaga sugan yihiin Gobolka Galgaduud, iyadoo kulamo ku aadan sidii howl galadaas loo qaadi lahaa ka socdaan Dhuusa Mareeb.
Dhaq dhaqaaqyada ciidan iyo diyaar garowga ay wadaan ciidamadan ayaa la sheegay inay horu dhac u tahay sidii duulaan loogu qaadi lahaa degmada Ceelbuur oo ka mid ah meelaha ay sida aadka ah ugu xoogan yihiin Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda qeybta 21aad ayaa la sheegay in dhowaan tababar loo soo gaba gabeeyay, si ay uga qeyb qaataan howl galada, hase yeeshee waxaa jira arrimo la isku haayo oo xaga maamulka iyo qaabka howl galada loo qaadayo, gaar ahaan ciidanka Ahlusuna oo diidan inuu ka qeyb galo dagaalka.
Ciidamadan wada jirka ayaa fariisimo ku leh duleedka Dhuusa Mareeb, iyagoo ka sameeya roondooyin ay ku sugayaan ammaanka, waxaana ka qeyb qaata roondooyinkaas gawaarida dagaalka.
Wafdi Wasiiro ah oo uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha, oo gaaray Dhuusa Mareeb ayaa kulamo la leh maamulka Ahlusuna iyo maamulka dowladda ee Gobolkaas, waxaana jira qodobo badan oo la isku haayo.
Boqolaal ka tirsan ciidamada Itoobiya ee dhowaan ka mid noqday howl galka AMISOM oo dhowaan soo gaaray Dhuusa Mareeb, ayaa qorsheynaya in duulaano labo dhinac ay kaga qaadaan bariga Gobolka Galgaduud oo intooda badan ay ka taliyaan Shabaabka.
0 Comments · 6814 Reads
Jowhar.com738,074 unique visits